‘असारलाई भनी कुटेका चिउरा चैतैमा घुन लाग्यो, छोरीलाई सुख छ भन्थ्यौ नि बाबा मेलैमा जुन लाग्यो’ | Seto Khabar
२०७८ अषाढ २९, मंगलबार (३ महिना अघि)
पाल्पा रामपुरका कृषक लक्ष्मी तिवारीलाई यसरी गीत गाएर पञ्चेबाजाको तालमा दिनभर धान रोपाइँ गरेको याद झल्झली आउने गर्छ । त्यस समयमा उनी रोपाइँलाई एउटा ठूलो पर्वका रुपमा पनि लिने गर्छिन् ।
अहिले यस्तो रोपाइँको प्रचलन त हराएको छ तर आफ्ना सन्ततिलाई ती पुराना यादहरु सुनाएरै भए पनि उनी चित्त बुझाउछिन् । “जमाना सस्तो र सजिलो पनि आयो । अहिले सजिलै खेतीपाती गर्ने, जोत्ने आदि कामका लागि आधुनिक प्रविधिहरु भित्रिए अनि किन दुःख गर्नु ? वर्षाको रोपाइँकै लागि भनेर अब वर्षभरि हलगोरु किन पाल्नु ? सजिलो पाएपछि मानिसले अप्ठेरो किन गर्नु र ?” उनी सुनाउँछिन् ।
आधुनिक प्रविधिको विकासले खेती गर्न सजिलो बनाएको त छँदैछ । यसमा उनी र अरू किसान पनि खुशी नै छन् तर प्रविधिको विकासले पुराना मौलिक संस्कृति नै हराउन पुगेकामा भने कृषक तिवारीलाई चिन्ता छ ।
“महिना दिन अघिदेखि नै रोपाइँका लागि आवश्यक पर्ने सबै सामग्रीको बन्दोबस्त गरेर राखिन्थ्यो, असार लागेपछि गाउँमा पालैपालो मेलापात हुन्थ्यो, दिनभर साथीसङ्गीसँगै हिलो खेल्दै बाजाको तालमा गीत गाउँदै धान रोपेर घर फर्कंदा थकानको अनुभूति पनि हराउने गथ्र्याे । अहिले ट्र्याक्टरले हिलो बनाएपछि दुई तीन घण्टामै रोपेर सकिन्छ”, तिवारीले भने ।
यस्ता गीतमा महिलाका घर माइती गर्दाका दुःखसुख वेदनाका भाव पनि झल्किन्थ्यो । मेलापात गर्दा आफूले भोगेका कष्ट सबै साथीभाइसँग गीतमार्फत पोख्दा हल्का पनि हुने गर्दथ्यो भन्छिन्, ज्येष्ठ नागरिकहरु । उनीहरुको अनुभव छ, “त्यस्तो गीतसङ्गीत न अहिले रोपाइँका बेला सुन्न पाइन्छ नत तीजकै बेलामा ।”
ट्र्याक्टर गाउँमा नभित्रिँदासम्म उनलाई वर्षायाम शुरु भएपछि खेतमा धान रोपाइँ गर्न भ्याइनभ्याई हुन्थ्यो । एक दशकयता भने आफूले गोरुले जोत्दै आइरहेको खेतमा ट्र्याक्टरबाट रोपाइँ हुन थालेपछि आम्दानी गर्ने बाटो नै बन्द भएको उनको भनाइ छ ।